I-Aprimo | Itekhnoloji yeNtengiso yeVidiyo
Sonwabe kakhulu ukumilisela inyathelo elitsha ecaleni kweNcwadana yeNtengiso yeTekhnoloji kunye Itekhnoloji yeNtengiso yeRadiyo… Sikwasungula uthotho lweVidiyo yeTekhnoloji yeNtengiso!
Umkhosi kwaye waveliswa ngu 12 Iinkwenkwezi Media, Olu luhlu luya kukwazisa kwiinkampani zetekhnoloji yentengiso kunye nabantu abasemva kweemveliso kunye neenkonzo! Eyokuqala kuthotho lwethu yile I-Aprimo, Inkampani yokuthengisa esizisebenzelayo ene isixhobo esiphucukileyo kakhulu sabathengisi.
Apha e-Indianapolis, sineenkampani ezininzi esele zilungele iividiyo. Ungakhathazeki, nangona kunjalo! Ukuba inkampani yakho yetekhnoloji yentengiso ayikho kumbindi weIndiana, siya kufumana imifanekiso kuwe kwaye i-12 Stars Media izakuxuba ividiyo ngokwazo. Gcina ukhumbula, ewe, ukuba uluhlu lokulinda sele lude kwaye kukho iindleko ezithile zokwenza iividiyo.
Nxibelelana nathi ukuba ufuna ukulandela! Enkosi ngokukhethekileyo kuRocky noZach abavela 12 Iinkwenkwezi Media ukwenza umsebenzi omkhulu kangako.
Musa ukuKhangela: zeziphi abathengisi ekufuneka bezazile
Isisombululo soLawulo lweProjekthi kubaCebisi